Global Voices teny Malagasy » Ben’ny Tanàna Ao Belgrady, Manohana Ny Lehiben’ny Polisy Manembantsembana Ny Asan’ny Mpanao Gazety · Global Voices teny Malagasy » Print
Ben'ny Tanàna Ao Belgrady, Manohana Ny Lehiben'ny Polisy Manembantsembana Ny Asan'ny Mpanao Gazety
Voadika ny 07 Avrily 2016 3:20 GMT 1	 · Mpanoratra Filip Stojanovski Nandika avylavitra
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Serbia, Fanampenam-bava, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Siniša Mali, ben'ny tanànan'i Belgrady. Sary: Istinomer / YouTube.
Nolavin'ny  ben'ny tanànan'i Belgrady, Siniša Mali, ny hanatanteraka ny fangatahan'ny  Mpanelanelana ao Serbia handroahana ny lehiben'ny Polisy kaominaly noho ny fanelingelenany ireo mpanao gazety miezaka manao fanadihadiana momba ny kolikoly.
Tamin'ny September 2015 , nosembantsembanin'ny polisy kaominaly tao Belgrady ireo mpanao gazety miasa ho an'ilay tranonkala mpanamarina ny tena zavamisy Istinomer  (Truth-O-Meter) ary tamin'ny Oktobra 2015 dia ireo mpanangona vaovao avy amin'ny Tambajotra Fitaterana Ny Heloka Bevava sy ny Kolikoly (KRIK) . Sivifolo andro taorian'izay, niditra an-tsehatra ny Mpanelanelana, nitaky ny hanoloana ny lehiben'ilay andiany mpampihatra lalàna miteraka resabe. Volana roa taorian'izay, neken'ny governemantan'ny tanàna ny vontoatin'ilay fangatahana, niaikeny heloka tamin'ny fanitsakitsahana ireo fepetra ka nampiasàna hery tafahoatra tsy ara-dalàna, saingy tsy nisy vokany tamin'ilay lehiben'ny polisy izany.
Ny 24 Febroary, nanambara  ilay Mpanelanelana fa naharay tatitra tamin'ny raharaha Istinomer izy nilaza fa nampihatra ireo teboka 32 natolony ny Polisy Kaominaly. Notsindrian'ilay Mpanelanelana anefa fa mbola eo am-piandrasana hatrany ny hanatanterahan'ny polisy ny fitakiana momba ny raharaha KRIK izy (indrindra fa ny fitakiana ny fametrahana fialàn'ilay lehiben'ny polisy kaominaly).
Namoaka fanambaràna iray  ny mpampihatra lalàna ao amin'ny tanàna nilazany fa, “amin'ny hoavy, hanao izay mifanaraka amin'ny lalàna fotsiny [izahay].” Ny 26 Febroary, nilaza imasom-bahoaka  ny fialantsinin'izy ireo momba ilay raharaha tamin'ny taona lasa nifanolanany tamin'ireo mpanao gazety ny ben'ny tanànan'i Belgrady sy ny Polisy Kaominaly, tamin'ny nilazàny fa ampy ho vahaolana iray amin'izany ny fanavaozana ny dingana sasantsasany fanaon'ny polisy.
Ho valinteny, nanambara  ny tariky ny Istinomer fa lavin-dry zareo ny toerana noraisin'ny ben'ny tanàna, izay lazain-dry zareo fa mahatonga ny fanararaotam-pahefan'ireo manampahefam-panjakana ho tsy misy dikany :
Miaraka amin'io fanambaràna io, nofoanan'i Mali, ben'ny tanàna, tanteraka ny ANDRAIKITRY ny manampahefam-panjakana izay manao kitoatoa ny asany— amin'ity tranga manokana ity, dia na ny asa natao, na ny tsy nefaina.
Ny lehiben'ny polisy kaominaly, izay nisisika niaro ireo fitondrantena tsy mendrika voaporofo vitan'ireo teo ambany fiadidiany, dia TSY MAINTSY mahafantatra tsotra izao ireo fepetran'ny polisy ary tsy maintsy mampihatra azy ireny. Ny fitondrantenan'i Nikole Ristić nandritra sy taorian'ilay tranga dia mampiseho fa, na izy tsy mahalàla ireo fepetra momba ny andiany izay ambany fifehezany, na raha fantany ireo fepetra ireo, dia omeny farovana ireo izay mandika azy ireny, izay mbola ratsy kokoa. Fa inona no nataon'ny olompirenena sy ny governemantan'ny tanàna ka mahatonga azy hànana manampahefana tahaka izany?
Ary io no tena antony itakiana ny hametrahan'i Ristić fialàna. Tsy hoe nanao zavatra tsy nahy izy, ka ho mendrika famindrampo. Fa ny fandraisany anjara mivantana tamin'ilay tranga  niarahana tamin'ny mpanao gazetin'ny KRIK, narahana fangiazana tsy ara-dalàna ny fitaovana ary famafàna ny zavatra voarakitra, dia midika fanahy niniana natao. Nandritra ilay raharaha, tsy nanao mihitsy izay hisorohana na hanakànana ny olony tsy hanitsakitsaka ny lalàna i Ristić.
Manaporofo izany fa tsy misy iraharahàn'ny polisy kaominaly ireo manampahefana ao aminy na hanaraka ny lalàna na tsia izy ireo, na hampiasa herisetra, na hanitsakitsaka ny maha-olona ireo mpanao gazety, amin'ny maha-olompirenena tsotra azy ireo sy amin'ny maha-matianina azy. Ny hiaro ny olony no mahamaika azy.
Ary io no tena antony marina tokony hanoloana azy—noho ny fampiharany fitsipika izay mifanohitra tanteraka amin'ny asam-panjakana rehetra: miaro ny olony amin'ny fomba rehetra, manoloana ny fitsaràna, ny lalàna ary ny olompirenena.
Mali: Horoahana ny Lehiben'ny Polisy Kaominaly.
Asehon'ny lahatsary ny fandraisana anjara mivantan'ingahy lehibe tamin'ireo tranga [hatramin'ny fampiasana hery ara-batana tamin'ireo mpanao gazety].
Araka ny avoitran'ny  KRIK, i Nikola Ristić, lehiben'ny Polisy, sy ny lefiny, Darko Vujsić, dia nanembantsebana, izy tenany mihitsy, ny asan'ireo mpanao gazety avy amin'ny KRIK izay niezaka hanontany ny ben'ny tanàna  momba ny tantara ratsin'ireo “trano 24″. Nomena fetrandro hatramin'ny fiandohan'ny volana Aprily  ny governemantan'ny tanànan'i Belgrady mba hanatanterahana ny fangatahan'ny Mpanelanelana ary hanome tatitra amin'io andrimpanjakàna io.
Karazana polisy monisipaly manokana ny polisy kaominaly ao Serbia, ambany fibaikoana mivantan'ny governemanta eo an-toerana, ivelan'ny fibaikoan'ny Minisitry ny Atitany. Araka ny lalàna, voafetra ny fahefany fa tsy toy ny an'ireo polisy mahazatra. Nandritry ny taona 2015, in-48 ny polisy kaominaly ao Belgrady no nampiasa hery  tamin'ny olompirenena, saiky ho indray mandeha isankerinandro.
Naneho ny tahony  ireo mpampiasa Twitter hoe ny fanitàrana ny fahefan'ny polisy kaominaly dia hamadika azy io ho karazana hery iray ivelan'ny polisy . Toy ny amin'ny raharahan'i Mali Ben'ny tanàna, rehefa mihoa-pefy ny polisy kaominaly, hoy ny sasany amin'ny mpampiasa aterineto, dia mazàna atosiky ny fanohanana avy amin'ireo manampahefana akaikin'ny praiminisitra ao Serbia, Aleksandar Vučić.
Manao tokim-panompoana amin'i Vučić manokana ve ireo polisy kaominaly?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/04/07/79765/
 September 2015: https://advox.globalvoices.org/2015/09/28/serbian-journalists-harassed-by-police-while-reporting-on-controversial-belgrade-construction-site/
 Tambajotra Fitaterana Ny Heloka Bevava sy ny Kolikoly (KRIK): https://www.krik.rs/
 fanambaràna iray: http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE/2221877/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0:+%D0%A3%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%9B%D0%B5+%D1%9B%D0%B5%D0%BC%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%99%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83.html
 nilaza imasom-bahoaka: https://youtu.be/PzHHcUcUzJA
 hanontany ny ben'ny tanàna: https://www.krik.rs/sinisa-mali-tajno-kupio-24-stana-na-bugarskom-primorju/
 Nomena fetrandro hatramin'ny fiandohan'ny volana Aprily: https://www.krik.rs/gradska-uprava-preispitacemo-navode-ombudsmana/
 nampiasa hery: http://www.istinomer.rs/clanak/1275/Komunalna-policija-Prinuda-koriscena-uvek-po-zakonu
 Naneho ny tahony: https://twitter.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0&src=typd
 hery iray ivelan'ny polisy: https://en.wikipedia.org/wiki/Parapolice